Igwe ihe nchacha ikuku - Shanghai FAUCI Technology Co., Ltd.
Onye na -ewepụ ikuku ikuku
Robot ikuku na -ekpofu ikuku
Nkà na ụzụ ọhụrụ
Asambodo na Akụkọ
Onye na -ekpofu ikuku ụgbọ ala
Deodorizer na friji
FAUCI Machine Disinfecting Machine Ajụjụ
Kedu otu esi eji igwe a?
Azịza: Nke mbụ, dị ka ntuziaka ahụ si dị, buru ụzọ dọpụ ihe nkiri nrachi nke nchacha na ihe nhicha ihe nzacha, tinyeghachi ya n'ime igwe dịka ọkwa akpọrọ ya, wee mechie mkpuchi ya.
Enwere ike idowe igwe n'ime ụlọ nwere oghere dabara adaba maka ihe nlereanya a, enwere ike iji ya rụọ ọrụ nke ọma mgbe agbanwuru ya.
(Oge nnọchi nke nhicha ihe na ihe nhicha ihe dị na igwe bụ ọkara afọ ka emechara ya, a ga -edochi ihe nzacha ndị ọzọ dịka ọkwa ịdị ọcha dị ka ntuziaka ahụ si dị)
Kedu ka igwe nchacha a si ehicha ma mee ka ọ dị ọcha?
Azịza: Igwe a na-eji ihe eji eme ihe na-ekpo ọkụ iji wepụta ifịk ifịk gaseous dị ọcha na ihe na-eme ka ọ dị ọcha, ma gbasaa ya nke ọma wee kpuchie akụkụ niile nke ikuku ime ụlọ site na ikuku ikuku na-ekesa. Ọ na -egbochi ma gbuo nje ma ọ bụ nje nwere ike ịpụta na ikuku n'oge ọ bụla, wee mebie ha ngwa ngwa. Na -ewepụkwa VOC gas na -emerụ ahụ na ikuku.
Kedu ihe kpatara nje bacteria ewepụtara? Biko kọwaa nke ọma.
Azịza: Ihe na-akpata nje bụ nke nwere ihe abụọ-chlorine dioxide dị ọcha na ROS (ụdị ikuku oxygen na-arụ ọrụ).
Chlorine dioxide bụ ọgbọ ọhụrụ amaara nke ọma nke na-eme ka ọ ghara ịdị irè. Ndị mmadụ na -ejikarị mmiri ọgwụ chlorine dioxide. Nrụpụ ọgwụ ya bụ ugboro 2.6-10 nke ihe ndị na-egbu ihe nkịtị dị ka mmanya 75%, chlorine, na acid hypochlorous. Enwere ike ikesa chlorine dioxide dị ọcha nke ọma n'ikuku n'ime steeti molekụla nano, yabụ na ọ nwere arụmọrụ nsị dị elu ugboro 50-100;
Ụdị oxygen ROS na -arụ ọrụ na -ezo aka na ikuku oxygen na -arụ ọrụ dị ka radicals free hydroxyl na radical free peroxy, nke kwekọrọ na isi ihe na -egbu nje bacteria na ahụ mmadụ, na -esite na mbibi na ikesa mmiri. Ọrụ nsị nke ihe ikuku oxygen ndị a na -arụ ọrụ dị elu karịa nke chlorine dioxide dị ọcha. Ọbụlagodi nke kacha sie ike igbu ụdị nje bacteria nke endospores dị n'ụwa, ROS nwere ike wepụ ha ozugbo. (Ikuku oxygen na-arụ ọrụ ROS nwere ọrụ dị elu yana obere ndụ. Naanị ọnụọgụ ọnụọgụ dị nso na ihe eji arụ ụlọ.
ROS na -arụ ọrụ oxygen na chlorine dioxide na -arụkọ ọrụ ọnụ iji mebie ma kpochapụ VOC dị iche iche na -emerụ ahụ.
Kedu ụkpụrụ nke ihe na -akpata nje nke ngwaahịa a iji gbuo nje, ebu na nje?
Azịza: A ga -ebibi mgbidi sel, membranes sel na akụkụ protein nke nje ma ọ bụ ebu, site na mkpokọta oxidative nke chlorine dioxide na ROS. Nje virus bụ ihe na-abụghị sel na-enweghị mgbidi sel, yabụ na ha nwere ike mebie ngwa ngwa ma mebie site na mbibi oxidative.
Ya mere, n'agbanyeghị ụdị nje bacteria, ebu, ma ọ bụ nje, ma ha na -eguzogide ma ọ bụ na -agbagharị, ọ nweghị ọdịiche dị mkpa na mmetụta mbibi oxyidative nke chlorine dioxide na ROS rụrụ na ha.
Kpọsị, igwe na-ehicha ihe a nwere ike igbu COVID-19 na ụdị ya?
Azịza: Ọtụtụ mba ekwupụtala n'ihu ọha na chlorine dioxide nwere ike igbu COVID-19 na ụdị ya.
N'ihi na ụlọ ọrụ nnwale anaghị enye ọrụ nnwale ọgwụ mgbochi ọrịa COVID-19 maka ugbu a, enweghị akụkọ nyocha ngwaahịa ozugbo.
Agbanyeghị, na Febụwarị 4, 2020, Kọmịshọna Ahụike Mba nke China wepụtara “Ọkwa na Ndepụta Mberede nke ụfọdụ ndị na -efe efe n'oge Mgbochi na Njikwa Ọria Coronavirus Pneumonia Ọhụrụ”, edepụtara ọgwụ na -egbu chlorine dị ka ngwaahịa mberede ka a ga -eji. ; 2020 Na Febụwarị 19, Kọmịshọna Ahụike Mba nke China wepụtara "Ntuziaka maka iji ndị na-efe efe" na nzaghachi ọrịa ahụ, nke depụtara ọgwụ dị iche iche eji egbu COVID-19. N'ime ndepụta ahụ, ekwuru na ihe na -egbu chlorine dioxide dị mma maka nsị ikuku.
Site na nkwupụta gọọmentị dị n'elu, ọ na-egosi n'ụzọ na-egosi ịdị irè ngwaahịa a na igbu COVID-19, n'otu oge ahụ, ROS nwere arụmọrụ nsị dị elu.
N'ezie, ike COVID-19 dị na ọrụ izo ya mgbe ọ banyere n'ahụ mmadụ, ọ bụghị na ya abụghị nke nwere ike n'onwe ya. Na gburugburu mpụga, COVID-19 nwere ike ị nweta chlorine dioxide na oxygen na-arụ ọrụ. Nsogbu bụ na mgbe ọ banyere n'ime ahụ mmadụ, ọ na -esiri ike igbu ma jiri teknụzụ ọgwụ ugbu a wepụ ya.
E jiri ya tụnyere ngwaahịa ndị na -asọ mpi n'ahịa, kedu ihe dị iche na uru?
Azịza: Ka ọ dị ugbu a, otu n'ime ụdị ngwaahịa dị n'ahịa bụ ikuku na -asachapụ ikuku, nke na -adọta ikuku ime ụlọ n'ime igwe maka mgbasa ozi na mmetọ, wee weghachi ikuku dị ọcha n'ime ụlọ. Usoro a enweghị ike nweta ogbugbu ozugbo nke nje na nje na ikuku nke na-apụta n'ime ụlọ n'oge ọ bụla tupu ahụ mmadụ ekuru ha, ọ nweghịkwa ike igbochi nnyefe nke ọrịa na ikuku ikuku n'otu oge;
Ụdị ọzọ bụ ihe na -efesa ọgwụ, nke na -efesa mmiri hypochlorous ma ọ bụ chlorine dioxide n'ime ikuku n'ime aerosol iji gbuo nje na nje na ikuku, na n'ihi na hypochlorous acid na -emepụta chlorine na dioxide n'ụzọ na -apụtachaghị ìhè. Mbara ikuku chlorine dị na mpaghara dị oke elu, nke ga -emebi ahụ mmadụ. Amachibidoro ọgwụ ndị na -egbu alụlụ ndị a ka ha nọrọ ebe ndị mmadụ nọ, a naghị ekesakwa ikuku ntụ anwụrụ ọkụ n'igwe. The disinfection arụmọrụ bụ nnọọ ala;
Ihe FAUCI AAPG wuru n'ime igwe na-ehicha ikuku FAUCI ji nwayọọ nwayọọ wepụta ụmụ irighiri klorine dioxide dị ọcha ma dị mma yana ion oxygen na-arụ ọrụ. N'aka nke ọzọ, ọ na -agbachi nkịtị ma na -egbu ụmụ nje ozugbo na ikuku, nke enwere ike igbochi ma chịkwaa ya ozugbo. N'aka nke ọzọ, ọ bụ naanị ịta ahụhụ dị oke ala nwere ike ịrụ ọrụ nsacha ọcha na ịdị ọcha nke ọma, ọ gaghị emerụ ndị mmadụ n'otu ụlọ ahụ ahụ.
Igwe nhicha ihe a ọ dị mma iji?
Azịza: Ọdịdị oxygen na-arụ ọrụ ROS nke arụpụtara n'elu ihe arụpụtara n'ime FAUCI AAPG nke ngwaahịa a bụ otu ihe kacha mkpa na enweghị ikewa n'ahụ mmadụ nke na-egbu nje na nje. Ọ bụkwa ihe ebumpụta ụwa ma dịkwa n'ime akara. Ọ bara uru na adịghị emerụ ahụ mmadụ.
Banyere ClO2, ọ nweghị ihe egwu atọ (carcinogenic, teratogenic, mutagenic) na ọ bụ ọkwa nchekwa ihe na-adịghị ize ndụ. Ekwenyela na ọgwụ ọgwụ chlorine dioxide maka nnwale nnwale sayensị ogologo oge na ngosipụta ugboro ugboro, a na-ahụta ya dị ka ihe dị mma iji na ahụike na ahụike, nri nri, nchekwa antiseptik, ọgwụgwọ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ, wdg. Nchịkwa Ọgwụ GB5749 na GB2760, enwere ike iji ya dị ka ọgwụ mmiri ọ drinkingụ drinkingụ na mgbakwunye nri. N'ime WHO metụtara gburugburu ọrụ na ụkpụrụ mba nke mba dị iche iche, oke oke nke itinye ohere ka ClO2 na-arụ ọrụ ugboro ugboro na ogologo oge bụ 0.3mg/m³, yana mwepụta nke ngwaahịa anyị na-ekwe nkwa nke ọma. dị ala karịa ọkọlọtọ a;
N'otu oge ahụ, ihe FAUCI AAPG wuru igwe na-ehicha ihe agafewo nnwale CMA/CNAS dị mkpa: a na-egosi nkwubi okwu nnwale nke inhalation na-adịghị egbu egbu; mmechi ule micronucleus sel bụ ihe ọjọọ niile, nke pụtara na enweghị mmụba anụ ahụ selụ na enweghị nsí mkpụrụ ndụ ihe nketa;
A na-eji ngwa nje arụrụ arụ (ihe FAUCI AAPG) na ngwaahịa metụtara ngwaahịa a na China na ụfọdụ mba ndị ọzọ kemgbe ngwụcha afọ 2019 maka mgbochi na ịchịkwa ọrịa COVID-19, na enweghị mmeghachi omume ọjọọ ọ bụla. achọtara ruo ugbu a.
Kedu ule na asambodo ka igwe nhicha ihe a nwere ugbu a?
Azịza: Igwe anyị agafeela nyocha dị mkpa nke ngalaba asambodo ndebanye aha nke CNAS, wee nweta asambodo EU CE-ROHS, asambodo FDA, asambodo MSDS, Nnwale nnwale nsị nsị, H1N1 Akụkọ Nje Virus, Staphylococcus Albus Test Report, Human Akụkọ nyocha Enterovirus 71, Akụkọ nnwale Escherichia Coli.
Kedu ihe ị ga -akpachara anya maka iji igwe nhicha ihe?
Azịza: here E nwere ihe eletriki dị na ngwungwu disinfection, nke enweghị ike ịsacha;
② Agaghị agwakọta ya na ihe ndị ọzọ na -egbu egbu alkaline ma ọ bụ ihe ndị dị ndụ;
③ Ọ ga -anọrịrị ihe karịrị otu mita site na ihe igwe na uwe;
④ Mgbe emepeghị akpa ahụ akara ya nke nwere ihe nsị, akpa ahụ nwere oke ihe ndị ahụ. Mgbe imepechara akpa ma wepụta ngwaahịa a, tinye ikuku n'ime ikuku ruo nkeji 1 ruo 5. Mgbe e gbubisịrị isi, a pụrụ iji ya mee ihe.
Ọ bụrụ na igwe nhicha ihe na -aga n'ihu na -arụ ọrụ n'ime ụlọ, nkpuchi ka dị mkpa?
Azịza: Ọ ka dị mkpa iyi nkpuchi na gburugburu ihe egwu dị elu mgbe mmadụ nwere ike ịnọ nso na ndị nwere ike ibute COVID-19.
N'ihi ọnọdụ ikuku, ihe nje bacteria na -egbu egbu nke ngwaahịa wepụtara nwere ike ọ gaghị ekpuchi ọnụ, imi na anya, ọkachasị mgbe ụmụ irighiri mmiri na -ada na nso nso ma ọ bụ na oke ọsọ (dịka imi), yabụ na -eji ihe mgbochi anụ ahụ. achọrọ, yabụ na ngwaahịa na nkpuchi kacha mma na njikọta.
Ajụjụ ọhụrụ ndị ọzọ
Azịza: Banyere nke a, m ga -akwado ndị ọrụ nke ngalaba dị mkpa nke ụlọ ọrụ anyị wee zaghachi gị mgbe emechara.